Handoa anao i Google mba hahitanao fa marefo amin'ny rindranasa Android | Androidsis
Google dia nanana rafitra napetraka hatrany izay andoavany ny famantarana ny fahalemena amin'ireo sehatra samihafa. Ankehitriny ny orinasa dia nanapa-kevitra ny hanitatra ny hevitra ho manarona fangatahana antoko fahatelo an'ny Google Play. Amin'ny dingana voalohany, tsy ny fampiharana rehetra no hiditra amin'ity programa ity.
Orinasa teknolojia maro no manome valisoa ara-bola bebe kokoa na latsaka ho an'ireo izay afaka mamantatra ny lavaka fiarovana amin'ny vokariny. Microsoft sy Google dia roa monja amin'ireo ohatra ireo.
Ny habetsaky ny vola andoavany matetika dia miovaova arakaraka ny hamafin'ny fahalemena hita, fa ny tena zava-dehibe tsy tokony hotadidina dia ny tsy fanomezana olona hanondroana ny fahalemena amin'ny vokatra mpifaninana.
Na izany aza, Google dia nanao fanambaràna mbola tsy nisy toy izany tao amin'ny indostria tato ho ato miaraka amin'ny fanombohana ny Fandaharana valisoa Google Security Security (Program Google valisoa fiarovana Google Play). Vaovao tsara ho an'ireo mpandrindra fampiharana Android izay tsy manana fahefana ara-bola handalina ny fiarovana ireo fampiharana azy ireo amin'ny antsipiriany.
Amin'izany fomba izany, Google dia handany sarany fanampiny, ary ireo mpampiasa Android dia hanana fahatokisana bebe kokoa amin'ny fampiharana ao amin'ny Play Store. Mandritra izany fotoana izany dia hanome toky bebe kokoa ny mpamorona azy amin'ny fahafantarana fa tsy namoaka fampiharana misy marefo izy ireo ao amin'ny fivarotana fampiharana finday lehibe indrindra.
Miara-miasa amin'ny HackerOne ho an'ny programa valisoa vaovao i Google
Amin'ny dingana voalohany, ny programa mamantatra ny marefo dia hoferana ho an'ny sasany amin'ireo fampiharana malaza indrindra ao amin'ny Google Play, na dia ho rakotra aoriana aza ireo rindranasa tsy dia fantatra loatra.
Ho fanatanterahana ity tetikasa ity, Google dia niara-niasa tamin'ny sehatra valisoa mahaleo tena fantatra amin'ny anarana hoe HackerOne. Na izany aza, tsy ny ezaka rehetra no ho eo an-tanan'ny HackerOne ary ilay goavambe Mountain View. Ireo mpandrindra fampiharana Android dia tsy maintsy manoratra ny fampiharana azy ireo ao amin'ny Google Play Security Reward Program. Ary taty aoriana vao azo antoka kokoa ny fampiharana.
Farany, ny tanjon'ity hetsika ity dia tsy iza fa ny fanamafisana ny fiarovana manontolo ny ekosistra fampiharana Google Play amin'ny alàlan'ny ezaka ara-bola fanampiny nataon'i Google.
Taloha dia nandoa vola i Google taloha Nanomboka tamin'ny $ 200 izy ireo ary niakatra hatramin'ny $ 200.000 ho an'ireo izay afaka namantatra ireo marefo hita ao amin'ny rafitra fiasa Android. Ny habetsany matetika dia miankina amin'ny hamafin'ny fahalemena hita.
Ho an'ny marefo amin'ny rindranasa Google Play, ny vola dia mety ho voafetra amin'ny isa an'arivony dolara marobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Handoa anao i Google mba hahitanao fa marefo amin'ny rindranasa Android
Huawei dia efa nivarotra telefaona maherin'ny 100 tapitrisa tamin'ny 2017